कस्ता हुन्छन् असल शिक्षक ? - Everest Dainik - News from Nepal
कस्ता हुन्छन् असल शिक्षक ?
शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण
याे पनि पढ्नुस सबै क्षेत्रको सामाजिक विषयको नतिजा सार्वजनिक (नतिजासहित)
याे पनि पढ्नुस शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध, होला त कार्यान्वयन ?
एउटा शिक्षक केवल पुरस्कार र पदको आकाङ्क्षी हुँदैन । उ साचो अर्थमा एउटा किसान जस्तै हुन्छ । उ कुनैपनि बिरुवाको भविष्य तय गर्न उसका हरेक परिवर्तनहरुमा आफ्नो भुमिका सहजै पहिचान गर्नसक्छ । भलै, जतिपनि मुस्कील र चुनौतिहरु किन नआउन् । तर, उ आफ्नो मार्गबाट कहिल्यै विचलित हुँदैन । किनकि उसको काम भनेको अध्यारोको बिरुद्धमा लड्नेवाला पीढीलाई भविष्यको अथाह चुनौतिहरुका लागि तयार पार्नु हो । जुन चुनौतिका बारेमा उ अनुमान मात्रै लगाउन सक्छ । किनकी ति भविष्यको गहिराइमा हुन्छन् । त्यसैले उ आफ्ना छात्रछात्राका क्षमतामा भरोसा गर्दछ । साथै, उनीहरुलाई आफ्नो जीवनमा संघर्ष गर्न र आफ्ना सपना साकार पार्न उ त्यसको पीछा गर्नका लागि सदैव प्रोत्सहित गरि नै रहन्छ । एजुकेशनपाटीबाट